Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada » Ndị Canada chọrọ ịga mba ọzọ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Rail njem • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Nnyocha ọhụrụ chọpụtara na ọ na -agụ ndị Canada agụụ maka njem gaa mba ọzọ, ebe pasent 87 na -akọ akụkọ njem bụ isi mmalite nke ncheta kacha amasị ha.
Ihe dị ka mmadụ anọ n'ime ise (pasent 78) nke ndị Canada kwuru ka ihe na -alaghachi na nkịtị, njem mba ofesi bụ otu n'ime ihe ha na -ele anya.
Ihe karịrị ọkara ndị Canada - pasent 55 - kwuru na ha nwere nnukwu agụụ ịga mba ofesi karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
Ihe na -erughị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị Canada - pasent 24 - kwuru na ha na -eme atụmatụ njem mba ụwa n'ime ọnwa isii na -abịanụ.
E wepụtara nsonaazụ nyocha ụlọ ọrụ kacha ọhụrụ nke na -amụba echiche nke ndị njem mba ofesi Canada taa.
Nchọpụta ahụ kpughere na ebe ọtụtụ ndị Canada na-eme njem mba ofesi (pasent 58) na-akpachara anya maka njem mba ofesi n'ihi ịrị elu nke Delta COVID-19 dị iche iche, yana ihe na-erughị otu ụzọ n'ụzọ anọ na-eme atụmatụ njem mba ofesi n'ime ọnwa isii na-esote, karịa. ụzọ abụọ n'ụzọ atọ (pasent 78) na-ekwu na njem mba ofesi bụ otu n'ime ihe ha na-ele anya ya ka ọrịa ọjọọ ahụ na-akwụsị.
Nnyocha ahụ gosikwara na ndị bi na Canada na -ala azụ karịa njem mba ofesi karịa ndị agbata obi ndịda ha, yana pasent 42 nke ndị America na -eme atụmatụ njem mba ofesi n'ime ọnwa isii na -esote, ma e jiri ya tụnyere naanị pasent 24 nke ndị Canada.
N'inye mmachi na -esite na njem, ihe karịrị ọkara (pasent 55) nke ndị Canada na -akọzi agụụ siri ike ịhụ ụwa karịa ka ọ dị na mbụ.
Nzaghachi kachasị maka ihe furu efu banyere njem mba ofesi gụnyere ịhụ nlegharị anya ọhụrụ (pasent 56), ịhụ gburugburu ọhụrụ (pasent 53), ịpụpụ na izu ike (pasent 53), na ịmụ gbasara ọdịbendị dị iche iche (pasent 52).
Nchọpụta Nnyocha Key:
Pasent 87 nke ndị Canada kwenyere na njem mba ofesi enyela ha ụfọdụ ihe ncheta ndụ kacha amasị ha.